COVID-19 Somali - PORTLAND REFUGEE SUPPORT GROUP
​MACLUUMAADKA iyo DHAQANKA
​Si gacan looga geysto sidii loo ilaalin lahaa beesheena nabad iyo caafimaad, boggaan wuxuu kusiin doonaa casriyaynta hadda, ilaha iyo macluumaadka. Maamulka Caafimaadka ee Oregon, Maamulka Caafimaadka Dadweynaha ee Deegaanka, iyo hay'adaha kal`e ee gobolka iyo deegaanka.
​Bartan waxaa ugu dambeysay in la cusboonaysiiyo: 5-23-2022
* Haddii markasta oo aad taabato boggaan uu kugeeyo bog kale oo luuqaddaada ahayn, luuqaddaada ka dooro meesha kore ama isticmaal Google Turjum. ​
* If any link on this page takes you to a page that does not appear in your language, please choose your language at the top of that page, or use Google translate.
Sida looga fogaado shaybaadhyada COVID-19 ee guriga dhexdiisa been-abuurka ah
Waxaa jira dhowr baaritaan oo COVID-19 ah oo guriga dhexdiisa ah oo ay oggolaatay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA), waxayna wakaaladu xaqiijisay in baaritaannada been abuurka ah ay sidoo kale ku dhex wareegayaan guud ahaan Mareykanka. Tijaabooyin been abuur ah ma ogola FDA waxaana laga yaabaa inayna si sax ah u shaqayn.
Waqtigaan, FDA waxay aqoonsatay laba baaritaan oo been abuur ah oo loo sameeyay inay aad ugu eg yihiin Flowflex COVID-19 Qalabka Tijaabada iyo Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee iHealth Antigen. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah baaritaannadaas, raadi calaamadaha soo socda inay been abuur yihiin:
Tayada daabacaada oo liidata ee qoraalka ama sawirada
Macluumaad ka maqan calaamada sanduuqa ka baxsan, sida nambarka badan, taariikhda uu dhacayo, barcode ama QR code
Khaladaadka naxwaha ama higaada ee calaamadda alaabta
Qaybaha xirmada kuma habboona sharraxaadda nuxurka ee sanduuqa
Fiiro gaar ah: Tijaabooyinka iHealth ee ay qaybiyaan Maamulka Caafimaadka Oregon maahan been abuur.
Hoos waxaa ah tusaale muujinaya farqiga u dhexeeya sanduuqa tijaabada Flowflex been abuur ah iyo kan sharciga ah. Sanduuqa been abuurka ah waxaa ka maqan lambarka faraha, taariikhda uu dhacayo iyo koodhka QR ee laga helay sanduuqyada Flowflex ee ay FDA ogolaatay. Sanduuqa dhexdiisa, waxa kale oo laga yaabaa inay ka weydo tilmaamaha luqadda Isbaanishka.
Xusuusin ku saabsan xidhashada maaskaro
Madaarka Caalamiga ah ee Portland iyo tareenada ayaa kor u qaaday shuruudaha xidhashada waji-xidhka, waji-xidhashaduna hadda waa ikhtiyaari. Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Multnomah waxay si adag ugu talinaysaa in dadku sii wadaan xidhashada maaskaro dhammaan gaadiidka dadwaynaha.
Coronavirus-ka muddada-dheer ee uu kafaalo qaaday Sharciga Naafada Mareykanka
Haddii aad qabtid cudurka loo yaqaan 'coronavirus' oo aad weli leedahay calaamadaha daalka, xanuunka neerfaha, ama ceeryaamo maskaxda, waxaa laga yaabaa inaad qabto xaalad loo yaqaan 'post-acute sequelae of coronavirus', oo haddii kale loo yaqaan 'coronavirus-dheer'. Haddii calaamadahaagu ay carqaladeeyaan awooddaada inaad qabato shaqadaada, waxaa laga yaabaa inaad xaq u yeelato u-shaqeeyahaaga is-waafajin macquul ah oo hoos yimaada Xeerka Naafada Ameerika. Akhri si aad wax badan uga ogaato Xeerka Naafada Ameerikaanka iyo sida uu u ilaaliyo shaqaalaha naafada ah, oo ay ku jiraan kuwa muddada dheer la noolaa cudurka 'coronavirus'.
Si aad u ilaaliso faa'iidooyinka caafimaadkaaga:
Haddii aad tahay xubin ka tirsan Qorshaha Caafimaadka Oregon (OHP), fadlan hubi in macluumaadkaaga xidhiidhka uu yahay mid cusub si Maamulka Caafimaadka Oregon, Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Oregon (ODHS) iyo Ururkaaga Daryeelka Isku-dubarid ay kula soo xidhiidhi karaan si ay u hubiyaan inaad awooddo. ceyrkaaga ilaali.
Si aad u cusboonaysiiso macluumaadkaaga xidhiidhka, wac 800-699-9075 si aad telefoon ugaga warbixiso isbedelada.
Talaalka hargabka bilaashka ah
In kasta oo xilliga hargabku uu badiyaa dhammaado Abriil, kiisaska hargabku hadda waa ku soo badanayaan Oregon. Khubarada caafimaadka dadwaynuhu waxay ku dhiirigaliyaan qof kasta oo lix bilood iyo ka weyn aan qaadan tallaalka hargabka xilli ciyaareedkan inuu qaato. Maamulka Caafimaadka Oregon (OHA) goobaha tallaalka COVID-19 ee heerka sare ah ee Beaverton, Salem iyo Wood Village hadda waxay bixiyaan tallaalada hargabka bilaashka ah, marka lagu daro tallaalada COVID-19 iyo xoojiyayaasha kooxaha da' kasta. Looma baahna ballan ama caddayn caymis ama xaaladda socdaalka. Akhri wax dheeraad ah oo ay ku jiraan faahfaahinta goobaha iyo saacadaha shaqada.​
Xiriirka ka dhexeeya hurdada iyo caafimaadka wanaagsan
Qiyaastii mid ka mid ah saddexdii qof ee ku nool Oregon ayaa sheegay in uu hurdo wax ka yar toddobo saacadood habeenkii taasoo, sida ay khubaradu sheegeen, kuma filna. Tani waxay u horseedi kartaa xaalado dabadheeraad ah sida niyad-jabka, wadna xanuunka, kansarka, istaroogga, neefta iyo buurnaanta. Oo marka aad ku darto walaaca ka imanaya nolosha inta lagu jiro cudurka faafa, habdhiska difaacayagu waa inay shaqeeyaan wakhti dheeraad ah si ay noo ilaaliyaan.
Fahamka natiijada baaritaanka COVID-19 ee taban
Xitaa haddii aad heshay natiijo xun oo COVID-19 ah, weli waad qaadi kartaa. Si kuwa kale loo ilaaliyo, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurku waxay ku talinayaan in haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama aad la kulantay qof laga helay cudurka, xidho maaskaro si fiican ugu habboon 10 maalmood oo buuxa marka dadka kale, xitaa haddii aad tijaabisay diidmo.
Tijaabada COVID-19: waa maxay run ama been?
Iyada oo ay jiraan macluumaad badan oo ku saabsan COVID-19, way adkaan kartaa in la ogaado waxa run ah ama been ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad maqashay in tijaabooyinka COVID-19 aysan ogaan karin kala duwanaanshaha Omicron. Mahadsanid, taasi waa been! Haddii aad tijaabiso togan oo aad su'aalo qabto, booqo boggayaga Imtixaanka togan ama wac khadkayaga (866-917-8881).​
Oregon waxay furtay goob cusub oo mug sare leh oo loogu talagalay tallaallada COVID-19 oo lacag la'aan ah, xoojiyayaasha iyo baarista
Marka kala duwanaanshaha Omicron uu sii faafo, baahida korodhka helitaanka tallaalada, xoojiyayaasha iyo tijaabinta way koraan. Si looga caawiyo buuxinta baahida, goob cusub oo mugga sare leh ayaa laga furay Portland.
Portland (talaalada, xoojiyayaasha iyo tijaabinta): PDX Expo, 2060 N. Marine Dr.
Ballanta tallaalada iyo xoojiyayaasha looma baahna. Ka hubi blog-kayaga xogtii u dambaysay ee ku saabsan jadwalka ballanta imtixaanka.
Wuxuu furaa Isniinta, Jan. 24, shaqeeya maalin kasta, 9 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.
Goobta bannaanka lagu wado
Dalabkaaga ku samee Tijaabooyin COVID-19 Guriga dhexdiisa ah oo bilaash ah
Qoysaska degan Mareykanka waxay USPS.com ka dalban karaan hal qeyb oo ah 4 baaritaan oo guriga ah. Waa kuwan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato dalabkaaga:
Xadka hal dalab ciwaankiiba
Hal dalab waxa ku jira 4 qof oo degdeg ah oo antigen ah oo COVID-19 ah
Dalabka waxa lagu soo diri doonaa bilaash laga bilaabo dabayaaqada Janaayo
Buuxi foomka HALKAN.
Mareeg cusub ayaa caawisa dadka laga helay COVID-19
Marka kala duwanaanshaha Omicron uu bilaabo inuu wado tirinta kiis sare ee Oregon, dad badan oo badan ayaa u baahan hanuunin iyo agab si loo hubiyo in iyaga iyo kuwa ku hareeraysan ay nabad qabaan.
Maamulka Caafimaadka Oregon waxa uu soo saaray shabakad cusub oo ay ku jiraan waxa la samaynayo haddii lagaa helo cudurka, haddii aad la kulantay, iyo sida loo raadsado agab haddii aad guriga ku go'doon tahay oo aad u baahan tahay taageero.​
Imtixaanka COVID-19 waa u diyaar ardayda ku jirta dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee Oregon
Taxaneheenna socda ee ku saabsan cabbiraadaha caafimaadka iyo badbaadada daboolan ee ay dugsiyada Oregon hirgeliyeen dadaal lagu ilaalinayo in dugsiyadu u furnaadaan wax-barid qof ahaaneed, aynu eegno imtixaannada.
Lakab kastaa waa muhiim
Tijaabada COVID-19 ee joogtada ah waxay ka caawin doontaa dugsiyada Oregon inay goor hore ogaadaan kiisaska caabuqa COVID-19. Marka lagu daro isku-duubnida, tani waxay sidoo kale ka caawin doontaa dugsiyada inay go'aamiyaan ardayda iyo shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay karantiilaan ama karantiil si looga hortago faafitaanka COVID-19.
Waxaa jira laba barnaamij oo imtixaan arday ah oo laga heli karo dhammaan dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee Oregon. Barnaamijyada imtixaamaadka ardaydu waa:
Baarista ardayda K-12 – Abbott BinaxNOW tijaabooyin degdeg ah.
Waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo calaamadaha calaamadaha iyo ardayda qaawan. Tani waxay kaa caawin kartaa in goor hore la ogaado caabuqa COVID-19 waxayna yaraynaysaa muddada karantiilka.
Baaritaanka baarista ardayda aan la tallaalin ee isticmaalka molecular (PCR)
imtixaanada. Barnaamijkan todobaadlaha ah waa arday aan lahayn calaamado, ama la kulmin COVID-19. Dugsiyada ka qaybqaadanaya waxa lagu meeleeyaa lammaane shaybaadhka gobolka ah. Ka qaybgalka iyo natiijadu waa qarsoodi; si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka togan ee COVID-19 ayaa lagu wargeliyaa maamulka caafimaadka dadweynaha ee deegaanka si loo baaro kiiska iyo raadinta xiriirka.​
Sida loo ogaado khayaanada taleefanka ee ku saabsan Coronavirus
Nasiib darro, mararka qaarkood marka dadku isku dayaan inay balamo tallaal sameeyaan, waxaa laga yaabaa inay halis ugu jiraan inay ku dhacaan khayaanada.
Waaxda Caddaaladda ee Oregon waxay bixisaa talooyinkan ku saabsan sida loo ogaado khiyaanada tallaalka:
Ma bixin kartid kharashka helitaanka tallaalka. Haddii uu qof ku soo waco si uu ballan kuugu sameeyo si uu lacag-bixineed kuugu beddelo, telefoon dhig.
Tallaalku waa bilaash. Haddii qof ku weydiiyo inaad bixiso kharashka tallaalka, waxay isku dayayaan inay kaa faa'iidaystaan.
Qof sharci ah ma soo wici doono, qoraal ama iimayl uma diri doono tallaalka oo ku weydiin doona lambarkaaga Lambarka Bulshada, macluumaadka xisaabta bangiga ama lambarka kaarka deynta.
Lagaagama baahna inaad bixiso lambarka Sooshal Sekuuritiga marka aad isu diiwaan gelinayso ballan tallaal.
Ku xidhida carruurta adeegyada ay u baahan yihiin si ay u horumaraan
Help Me Grow (HMG) waa barnaamij qaran oo iska kaashada iyo isku duwaya caruurnimada hore iyo waaxyaha caafimaadka si ay u caawiyaan in la aqoonsado carruurta halista ugu jirta dib u dhac koritaan si ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin.
Oregon gudaheeda, Help Me Grow waa ilo sir ah oo bilaash ah oo loogu talagalay qoysaska, bixiyeyaasha caafimaadka iyo bixiyeyaasha adeegga bulshada oo bixiya isku xirka adeegyada maxalliga ah, iyo macluumaadka ku saabsan horumarinta korriinka iyo waxqabadyada waxbarashada ee taageera koritaanka caafimaadka leh ee carruurta da'doodu u dhaxayso 0 ilaa 6 ee Multnomah, Washington iyo Degmooyinka Clackamas.
Si aad wax badan uga barato booqasho, Help Me Grow Oregon.
Diiwaangelinta dheefaha Medicare hadda waa la heli karaa
Diiwaangelinta furan ee Medicare waa Oktoobar 15 ilaa Diseembar 7, 2021. Hagaha cusub ee 2022 Oregon ee Qorshayaasha Caymiska Medicare ayaa hadda diyaar ah si uu kaaga caawiyo inaad go'aansato qorshaha adiga sida ugu fiican kuugu shaqaynaya.
Muddada isdiiwaangelinta waxa ku jira Faa'iidada Medicare iyo Qaybta D qorshooyinka dawada. Qorshayaasha Medicare iyo caymiska dawooyinka la qoro ayaa isbeddela sannad kasta, marka waxaa muhiim u ah dadka Oregon ee ka diiwaangashan Medicare inay qiimeeyaan ikhtiyaarkooda qorshahooda oo ay isbeddel ku sameeyaan xilliga diiwaangelinta furan.
Barnaamijka Caawinta Faa'iidooyinka Caymiska Caafimaadka ee Waayeelka ee Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon waa diyaar si ay u fahmaan dadka Oregon
Barnaamijka Caawinta Faa'iidooyinka Caymiska Caafimaadka ee Waayeelka (SHIBA) waxa kale oo uu leeyahay la-taliyayaal diyaar ah si ay kaaga caawiyaan inaad fahamto fursadahaaga iyo faa'iidooyinka Medicare, bixinta hagidda diiwaangelinta, iyo ka jawaabidda su'aalaha la xiriira dheefaha Medicare. Ku hel adigoo booqanaya https://SHIBA.Oregon.gov ama wac (800) 722-4134 (lacag-la'aan).
Caawinaad ma u baahan tahay? Booqo websaydka ilaha Waaxda Shaqada ee Oregon si aad u hesho barnaamijyo iyo adeegyo la heli karo
Maadaama barnaamijyada dheefta federaalku dhammaadeen Sebtember 4, waxaa laga yaabaa inaad raadsato caawimaad. Waaxda Shaqada ee Oregon waxay isku dubarideen shabakad khayraad oo aad ka ogaan karto barnaamijyada iyo adeegyada aad heli karto, sida SNAP, caawinta kirada iyo guriyeynta, kaalmada meherad yar iyo qaar kaloo badan.​
Ma u baahan tahay in lagu raaco ballanta tallaalkaaga? Caawinaad ayaa la heli karaa
Waxaa jira waxyaabo badan oo laga taxadarayo nolol maalmeedkeenna oo ay adkaan karto in mudnaanta la siiyo caafimaadkeenna. Haddii ay kugu adagtahay inaad tagto rug caafimaad ama farmashiye si aad iskaga tallaasho, 211 hawl wadeen ayaa kaa caawin kara. Waxay ku siin karaan macluumaadka gaadiidka iyo tixraacyada ku saleysan goobtaada iyo xaaladdaada.
Wac 211 ama 1-866-698-6155 wixii caawimaad ah.
Sida looga helo tallaalka corona gudaha Oregon
RIIX HALKAN KA DOORO LUQADDAADA DUGAN BOGGA
Qaadashada tallaalkaaga: Ogow kahor intaadan aadin
Haddii aad leedahay ballan tallaal oo soo socda, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida uu noqon doono iyo sida loogu diyaargaroobo.
Waa tan waxa aad ka filan karto ballanta:
Adiga, iyo qofka ku tallaalaya, waxaad u baahan doontaa inaad xirtaan dabool aface oo daboolaya afkaaga iyo sankaaga.
Tallaalka waxaa lagaa siin doonaa garabkaaga sidaa darteed way ku caawinaysaa inaad xirato shaati gacmo-gaaban.
Lagaagama baahna inaad muujiso aqoonsi ama aad siiso lambarka sooshal sekuuriti.
Haddii aad caymis caafimaad leedahay, waxaa lagu weydiin karaa inaad tusto kaarkaaga caymiska si bukaan socod eegtada ay iyaga ugu dallacaan khidmadda maamulka.
Tallaalka Aftergettinga COVID-19, waad ka kormeeri doontaa goobta ugu yaraan 15 daqiiqo. Wax ka ogow tallaalka 'COVID-19' iyo tallaalada xasaasiyadda ee dhifka ah.​
Waa inaad heshaa kaarka tallaalka oo leh calaamadda CDC ee dul taal. Ku hay kaarkaas. Waxaad mayalsow dooneysaa inaad sawir kaqaadato kaarkaaga talaalka hadii aad si khaldan u dhigtid.
Jadwal u samee qiyaastaada labaad ee ka socota magaca 'same' halkii aad ka heshay kii kuugu horeeyey.
Waxbadan ka baro bogga Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) bogga.
Barnaamijka Caawinta Kireynta Degdegga ah ee Oregon wuxuu caawin karaa kiraystayaasha aqoonta u leh
Laga bilaabo Maajo 19, 2021, kiraystayaasha aqoonta leh ee la soo dersay dhibaato dhaqaale oo ay ugu wacan tahay cudurka faafa ee coronavirus, oo qatar ugu jira guri la’aan ama deganaansho la’aan guryo ah, waxay dalban karaan Barnaamijka Caawinta Kireynta Degdegga ah ee Oregon.
Barnaamijku wuxuu ka caawiyaa qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee u qalma kirada iyo korontada. Barnaamijkan wuxuu adeegsadaa lacagaha laga helo Barnaamijka Gargaarka Kireynta Degdegga ah ee federaalka, kaas oo u qoondeeyey wadar dhan $ 280 milyan Oregon. Xaaladaha badankood, codsiyada la oggolaaday waxay keeneysaa lacag-bixinno si toos ah loogu sameeyo milkiilayaasha guryaha iyo bixiyeyaasha korantada.​​
Tayada Hawada - 5/23/2022
Xaqiiqooyinka ku saabsan COVID-19 - Sida loo ilaaliyo naftaada - Sida loo karantiilo - Sida loo is-karantiilo
Hagaajinta Hawada ee Gurigaaga
Sigaar cabidda iyo qalabka elektroonigga ee sigaarka lagu cabbo ayaa ka sii dari kara COVID-19
Haddii qof sigaar caba ama hore u cabi jiray uu ku dhaco COVID-19, waxay u badan tahay inuu ku dhaco xaalad halis ah iyo fayraska oo ku xumaada marka loo eego qof aan sigaar cabbin. Joojinta sigaar cabista ayaa ilaalinaysa adiga iyo dadka kaleba inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19.
Khamriga cabitaanka inta lagu jiro COVID-19
Isticmaalka aalkoladu waxay kordhin kartaa halista cudurka daran ee neefsashada iyo oof-wareenka, oo mararka qaarkood lala xiriiro COVID-19.
Xusuusnow inaad ka hortagto sunta rasaasta
Haddii aad ku sii nagaanayso gurigaaga sababo la xiriira COVID-19 (ama sameynta
dayactirka guriga), waa inaad xasuusnaataa inaad ka hortagto sunta rasaasta.
Waxyaabaha joogtada ee aan guriga kula kulanno sida rinjiga, waxyaabaha la isku qurxiyo, dhirta udgoon iyo ciida dhammaantood waxaa ku jiri kara sunta rasaasta. Gaar ahaan waa muhiim inaad ka tijaabiso gurigaaga sunta rasaasta haddii aad leedahay caruur yar yar, ama kahor intaadan bilaabin dayactirka guriga. Wasaaradda Ilaalinta Deegaanka ee Mareykanka (EPA) waxay heestaan liis garayn ballaaran u leedahay waalidiinta si ay u go'aamiyaan haddii ay jirto halista sunta rasaasta ee guryahooda.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ka hortagga ku sumowga macdanta rasaasta waxaad ka heli kartaa bogga EPA.
Goobaha Shaqada iyo Loo Shaqeeyaha
Miyaad ku khasaartay dakhli ama saacado shaqada sabab la xiriirta COVID-19?
Waxaad xaq u yeelan kartaa in lagaa caawiyo bixinta kirada, yutiilitida, daryeelka carruurta, ama waxyaalaha kale oo aad u baahantahay... Akhri wax dheeraad ah
Fasaxa lacag la'aanta ah ee loo heli karo karantiilka COVID-19
Barnaamij cusub ayaa bilaabanaya toddobaadkan oo caawinaya dadka ka shaqeeya Oregon ee u baahan in ay is karantiilaan COVID-19 dartiis iyagoon haysan fasax. Barnaamijka fasaxa mushaarka ku meelgaarka ah ee COVID-19 waxaa lagu maalgaliyey $ 30 milyan oo laga helay dowladda federaalka si looga caawiyo dadka Oregon dagan.
Dadka uqalma waxay heli doonaan $ 120 maalintiiba ilaa 10 maalmood (wadarta $ 1,200) ama ilaa inta uu karantiilka ku jiro.
Shaqaaluhu waxay caawimaada ka dalban karaan halkaan laga bilaabo maanta oregon.gov/covidpaidleave.
Foomka dalabka waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Isbaanish, iyo Ruush. Kuwa aan helikarin foomka elektaroonigga ah waxay wici karaan 833-685-0850 (lacag-la’aan) ama 503-947-0130. Kuwa u baahan caawimaad luqad kale oo aan ahayn seddexdaan waxay wici karaan 503-947-0131. Waaxda Macaamiisha iyo Adeegyada Ganacsiga (DCBS) iyo Waaxda Canshuuraha ayaa iska kaashanaya barnaamijka cusub si loo hubiyo in shaqaalaha ay buuxiyaan shuruudaha u-qalmitaanka ee lagama maarmaanka ah. Si aad u aragto haddii aad la kulantid, qaado su'aalahaan u-qalmitaanka, ama eeg shuruudaha ku yaal websaydhka DCBS. Sababtoo ah lacagaha la heli karo way kooban yihiin, codsadayaashu waxay dalban karaan oo keliya hal xilli karantiil.
Faafida COVID-19 ee goobaha shaqada - Badbaadada hawada gudaha iyo COVID-19
Wixii ugu dambeeyay oo iimeel lagugu soo dirayo, ka hel Oregon Health Authority (Maamulka Caafimaadka Oregon).
Sideen u horumarin karnaa boggan? *
Bartan waxaa ugu dambeysay in la cusboonaysiiyo: 5-23-2022
Tag xagga sare ee bogga